Xarumo Hay’adeed oo lala wareegay Dhuusamareeb. – Hornafrik Media Network
Xarumo Hay’adeed oo lala wareegay Dhuusamareeb.
Maamulka Kooxda Ahlu Sunna ee Gobalka Galgaduud qaybo ka mida maamusha ayaa xiray Xarumihii Hay’adaha Midnimo iyo Iida ee Magaaladda Dhuusamareeb. Waxayna gabi ahaanba la wareegeen Xafiisyadii Hay’adahaasi oo haatan u muuqda inay isku badaleen Talisyo Maleeshiyo.
Maleeshiyaad fara badan oo Ahlu Sunna ka tirsan ayaa lagu arkayay oo dhex dagay Xarumahaasi. Waxaana laga saaray Xafiisyadda Hay’adahaasi hawl wadeenaddii 2-daasi Hay’adood. iyadoona Hay’adahan la joojiyay sidoo kale dhamaan adeegyaddii ay ka hayeen Deegaanadda ay Kooxda Ahlu Sunna maamusho.
Kooxda Ahlu Sunna waxay horay u xirtay Xarumo Hay’adeed iyo Goobo Waxbarasho. waxayna sidoo kale xilligii Abaarta ugu darnayd is hortaagtay inay Shacabka ku hoos nool Deegaanadda ay maamusho la gaarsiiyo Gurmadka Abaaraha.
Maamulka Hornafrik oo idin leh Ciid Wanaagsan.